62 N’ihi Zayọn, m gaghị agba nkịtị,+ n’ihi Jeruselem,+ m gaghị anọ jụụ, ruo mgbe ezi omume ya nwuru dị ka ìhè,+ nzọpụta ya enwuokwa dị ka ọwa nke na-enwu ọkụ.+
2 “Mba niile ga-ahụ ezi omume gị,+ gị nwaanyị,+ ndị eze niile ga-ahụkwa ebube gị.+ A ga na-akpọ gị aha ọhụrụ,+ bụ́ nke Jehova ga-eji ọnụ ya gụọ gị.
3 Ị ga-aghọ okpueze mara mma n’aka Jehova,+ ghọọkwa ákwà nke eze na-eke n’isi, n’ọbụ aka Chineke gị.
4 A gakwaghị akpọ gị nwaanyị a hapụrụ kpamkpam;+ a gakwaghị asị na ala gị bụ ebe tọgbọrọ n’efu;+ kama a ga-akpọ gị Onye Ihe Ya Na-atọ M Ụtọ,+ kpọọkwa ala gị Nwunye E Nwe Enwe. N’ihi na ihe gị ga-atọ Jehova ụtọ, a ga-enwekwa ala gị enwe dị ka nwunye.+
5 N’ihi na ụmụ gị ndị ikom ga-alụrụ gị+ dị ka nwa okorobịa na-alụrụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke. Chineke gị ga-aṅụrị ọṅụ n’ihi gị+ otú nwoke nke na-alụ nwaanyị ọhụrụ si aṅụrị ọṅụ n’ihi nwaanyị ọ na-alụ ọhụrụ.+
6 Enyewo m ndị nche ọrụ+ ịnọ n’elu mgbidi gị niile, gị Jeruselem. Ka ha ghara ịgbachi nkịtị mgbe ọ bụla ma n’ehihie dum ma n’abalị dum.+
“Unu ndị na-akpọ aha Jehova,+ unu agbachila nkịtị,+
7 unu ekwela ka o zuo ike ruo mgbe o mere ka Jeruselem guzosie ike, ee, ruo mgbe o mere ka ọ bụrụ ihe otuto n’ụwa.”+
8 Jehova ejiriwo aka nri ya+ na ogwe aka ya dị ike+ ṅụọ iyi, sị: “Agakwaghị m enye ndị iro gị+ ọka* gị ka ha rie, ndị mba ọzọ agakwaghị aṅụ mmanya ọhụrụ gị,+ bụ́ ihe ị dọgburu onwe gị n’ọrụ nweta.
9 Kama ọ bụ ndị chịkọbatara ya ga-eri ya, ha ga-etokwa Jehova; ọ bụkwa ndị mepụtara ya ga-aṅụ ya n’ogige nsọ m.”+
10 Pụọnụ, sinụ n’ọnụ ụzọ ámá pụọ. Wepụnụ ihe nọchiiri ndị m ụzọ.+ Wụọnụ ájá n’ụzọ, wụọnụ ájá n’okporo ụzọ. Wepụsịanụ nkume dị na ya.+ Gwunyerenụ ndị dị iche iche ihe mgbaàmà.+
11 Lee! Jehova emewo ka a nụ ya n’ebe kasị anya n’ụwa,+ sị: “Gwanụ ada bụ́ Zayọn,+ sị, ‘Lee! Nzọpụta gị+ na-abịa. Lee! O ji ụgwọ ọrụ ọ ga-enye,+ ụgwọ ọ ga-akwụ dịkwa n’ihu ya.’”+
12 Ndị mmadụ ga-akpọ ha ndị dị nsọ,+ ndị Jehova gbapụtara;+ a ga-akpọkwa gị Obodo A Chọtara Achọta, Obodo A Na-ahapụghị Kpamkpam.+
^ Aịz 62:8*
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D23%26Chapter%3D62%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl